Ihe nlele nke abụọ nke Android N dị ugbu a | Androidsis
Google weputara Android N Preview 2 maka ngwa Nexus
Dị ka Google gosipụtara mgbe ọ wepụtara nlele mbụ nke Android N, anyị ga -enwe otu mmelite kwa ọnwa ruo mgbe ọ mechara rute n'ụdị ikpeazụ ya n'oge ọkọchị. Otu gam akporo N nke na -abịa ịkọwapụta ihe Marshmallow bụ wee tinye aka n'isi ihe sistemụ arụmọrụ maka ngwaọrụ mkpanaka Google n'onwe ya ugbu a.
Ugbu a Google ewepụtala ozi ọhụrụ Nyocha Android N nke abụọ site na saịtị onye nrụpụta nwere onyonyo ụlọ ọrụ dị. Nke a, nke pụtara, na ndị nwere Nexus nwere gam akporo N ga -enwe ike nweta mmelite OTA maka ụbọchị ole na ole sochirinụ.
Ụdị ọhụrụ ahụ jiri nọmba nrụpụta NPC91K bịarute ma dị maka Nexus 5X, 6P, 6, 9, 9 LTE ​​na Pixel C. Ụdị dị mgbe niile maka ndị chọrọ ịnwale ụfọdụ atụmatụ ọhụrụ nke gam akporo, ebe ọ bụ na ọ dịghị mkpa isonye na beta ọ bụla.
Nke a bụ mmelite nke abụọ nye nke gara aga site na ndị mmepe, nke mbụ bịarutere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ọnwa gara aga. Google ewepụtala ụfọdụ nkọwa maka mmelite a nke gụnyere API na -enye Vulkan 3D, ụzọ mkpirisi na onye nrụpụta yana usoro emojis ọhụrụ (Unicode).
Usoro ọhụrụ nke ụdị nke gara aga na -abata maka mee ka akụkụ ahụ siri ike nke Android N nke ka nwere ọnwa ole na ole tupu ọ nọ n'ụdị ikpeazụ ya. Enwere ike ịnwe akụkọ ma wepu ụfọdụ atụmatụ ndị ahụ anyị chịkọtara n'oge ewepụtara ụdị nke mbụ.
Have nwere ntinye a iji mara ihe kachasị pụta ìhè, nke a bụ maka ihe pụrụ iche nke achọtara na nke gara aga yana nke ikpeazụ na obere akụkọ. Mgbe anyị amaghị ezigbo aha Android N, anyị na -aga ozugbo na Google I / O 2016 ebe anyị ga -ama ozi ndị ọzọ gbasara ụdị ọhụrụ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Google weputara Android N Preview 2 maka ngwa Nexus
Minecraft Realms na-abịakwute gam akporo na ụdị alpha
Ọhụrụ Google Play Games melite na-enyere ndị NJ ihe ọkpụkpọ na akpaka nbanye na egwuregwu vidio